भुवन र शिव अभिनित यति राम्रो गीतलाई पनि लाइक भन्दा डिसलाइक बढी, यस्तो छ कारण (भिडियो हेर्नुस्) – Online Khabar 24
नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा महानायक विवादले उग्र रुप लिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कलाकारका पक्ष विपक्षमा तर्कहरु आइरहेका छन् । महानायकको वारेमा बोल्ने कलाकारहरु पनि ट्रोल बन्न थालेका छन् ।
केही दिन अघि महानायकका विषयमा अभिब्यक्ति दिएका शोभित बस्नेत पनि विवादित बने । त्यसेको कारणले उनको फिल्म पनि प्रभावित भएको छ ।
त्यस्तै, एक साताअघि सार्वजनिक भएको फिल्मको ट्रेलरले युट्युबमा १ लाख पनि भ्युज पाउन सकेको छैन । त्यसमा पनि लाइक गर्ने भन्दा डिसलाइक गर्ने धेरै छन् । दुवै भिडियोमा आएका प्रतिक्रियाहरू प्रायस् महानायक विवादमा नै केन्द्रित छन् । राजेशलाई महानायक नस्वीकार्दा यस्तो हालत भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ ।
अहिले निर्देशक सोभित बस्नेतले राजेश हमाललाई नै महानायक स्वीकारेका छन् । उनले फिल्मको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा नै राजेशको फोटोलाई प्रमुख अतिथि बनाएर महानायक स्वीकारेका हुन् । हेर्नुस भिडियो,
Prevसाँघुरो डेरादेखि आफ्नै आलिसान घरसम्मको यात्रा, यस्तो छ अभिनेत्री सरिता लामिछानेको घर संघर्ष !
nextअन्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ? यस्तो छ यसको अचम्म पार्ने रहस्य !